WASIIRKA ARIMAHA DIBADA SOMALIYA IYO CAJAAIBKA SAFARKIISA !! | Toggaherer's Weblog
MADAXWEYNE RIYAALE OO DHUL DAD DANYAR AHI DEGAN YIHIIN SIIYEY GACANSADE JAMAC OOMAR
WASIIRKA ARIMAHA DIBADA SOMALIYA IYO CAJAAIBKA SAFARKIISA !!
Hargasysa 22 Feb 2009 ToggaHerer
WASIIRKA ARIMAHA DIBADA SOMALIYA IYO CAJAA’IBKA SAFARKIISA
Waxa loo magacaabay wasiirka Arimaha Dibada dalka somaliya Mudane maxamed C/Laahi OOmaar oo ah aqoon yahan dalkan Ingiriiska wax ku bartay. Mudane Maxamed waa ayaa ku sugnaa Magaalada Hargeysa markii loo magacaabay jagadan. Hadaba waxa cajaa’ib ahayd in Maxamed 4 saacadood kadib safar dhulka ah uu kaga baxay Hargeysa , una jihaystay wadanka Jibuuti.
Maxamed waxa kusoo dhaweeyay xuduuda lawya-cado ee xadka u dhaxeeya Somaliland iyo Jabuuti wasiir Cali Cabdi. Halkaasoo looga si gelbiyay Caasimada Jabuuti.
Mucjisada meesha taalay ayaa ahayd, dawlada somaliland oo badanaa eedaysanayaal u taqaanay nimanka xilka ka qabta Dalka somaliya, ayaan iyadu habayaraatee hawshaa wax ay kasoo hadal qaaday jirin. Dadka aad ugu dhuun daloola siyaasada ayaa iyaguna odorasady in sirdoonka iyo madaxda wasaarada arimaha guduhu la socotay ama ugu yaraan ogaan karayeen joogitaanka Maxamed laakiin aanay rabin inay wiilkaas qabtaan bedelkeed-na kula taliyay in guure kaga hayaamo hargeysa si jagadaa u calfado.
Hadaba doonashada Jagadan oo Maxamed uga hayaamay Jabuuti waa mucjiso marka loo eego, sida ay ula dhaqmi jireen madax hore oo dalka qaarkood dhinkasoo gaadhay. Mise siyaasada somaliland ayaa is bedeshay ku aadan arimaha madaxda somaliya.